Kwehlukanisa yokugezela yaba izingxenye obusebenzayo wenziwa usebenzisa ngodonga. Zenziwa ngezinto ezahlukene futhi kulula ukufaka ngokwakho. Kwehlukanisa udonga eshaweni kungenzeka ingilazi noma Gypsum, foldable noma Olwandisekayo. Ukusetshenziswa izinto ezahlukene ivumela ukudweba kuleli gumbi ngangokunokwenzeka kahle, ukugcina isitayela esisodwa kanye nokusungulwa kwezobuciko.
Isixazululo eliphezulu zonke yokugezela udonga ingilazi, okuyinto ngempumelelo uhlukanisa isikhala ngamaqembu amagatsha, hhayi afihlela. Nokho, izakhiwo ezifana ukusungula izandla zabo ngeke isebenze - njengoba umthetho, ukufakwa kwabo wenziwa kokuphothula yokugezela. Glass ukwahlukanisa ngenxa eshaweni muhle ngoba engase aklonyeliswe ifilimu anemibala ehlukene. Ngakho, isikhala design zingenziwa umuntu ngamunye.
Glass ngodonga kuthiwa alo, beya, osabalalayo, okwesikhashana, Coupe kanye transformers. Ngakho, ungakhetha inketho ubukhulu nezici yokugezela ethile. Kusukela ukukhiqizwa esakhiweni esifana usebenzisa ingilazi omnene, kuphephile ngokuphelele.
Izici ingilazi ngodonga
Ukukhiqiza eshaweni ngodonga kokuba okusekelwe aluminium, kusukela lapho imikhiqizo imbozwe powder enamathela ekhethekile. Isithunzi kuyinto ingilazi izinhlobo - ekufinyeleleni amazinga, ukuhamba, kalula ukufakwa kanye umhlobiso amathuba ngezindlela ezahlukene. Ikakhulukazi ngokuvumelanayo, babheka izindlu zangasese, lapho iminyango nazo ezenziwe ngengilazi.
Ukwahlukanisa ngenxa eshaweni ngengilazi kungaba ngaphandle luhlaka, isb ngaphandle yenethiwekhi isici. Kulokhu, kokungathembeki Kwenziwa kwi umile ebusweni nokufakwa, iziqeshana bese izixhumi. Futhi design Bawulondoloza operation, it is kwahambisana by eliphezulu kanye nokufakwa okuthembekile. Ngu indlela sokuvula izindonga ingilazi ngokuvamile beya noma jika - kusindisa esitholakalayo.
okwakhiwa ngalo la mabhodi
Indlela elula yokufaka ukwahlukanisa eyenziwe okwakhiwa ngalo la mabhodi eshaweni. Indaba ekahle ngokudala izakhiwo ezakheke ehlukahlukene kanye ukucupha. kalula design ngenxa isakhiwo leyo nto ingagoba wanquma. Ngaphezu kwalokho, ungenza ucingo enjalo, futhi ngezandla zakhe. Kulandzelana kwalokucuketfwe lokuhleliwe imisebenzi kuleli cala kuyoba kanje:
Okokuqala, lokhu kubanga nohlaka ngesisekelo amaphrofayli metal. Banamathele phansi, ophahleni noma obondeni ku dowels noma ngezikulufo.
amaphrofayli nithela asetshenziselwa ukuqinisa kwesakhiwo.
Uma ukwahlukanisa kuyinto of design eziyinkimbinkimbi, ibuye usebenzisa amaphrofayli, dala niches okuyinto bafa plasterboard lewebhu usayizi ofanele.
Okwenziwe Uhlaka Plating. Ngenxa yalesi, futhi, isetshenziswa okwakhiwa ngalo la mabhodi, futhi kungcono uma kuwukuthi amashidi. Kulokhu, udonga oluhlukanisayo okwesikhathi eshaweni ngezandla zabo kuyoba esheshayo nelula. Sheathing is ezenziwe thwi, kungenziwa screwed ezindaweni ezahlukene, into esemqoka ukuthi kwaba obandayo okunokwethenjelwa futhi iqine.
Polycarbonate: Izinzuzo nezingozi nebubi
Lokhu kwaziswa ingaphinda isetshenziswe ukudala ngodonga. imiklamo okunjalo isimiso yokuphepha zifane ingilazi, futhi imfuneko eyinhloko ukufakwa - ukusetshenziswa izinga nokufakwa. Ngenxa amandla nezindlela ezihlukahlukene zokusisebenzisa kwale nto ngokuya okusetshenziselwa ukufakwa zangasese.
Stylish kwalokho yokugezela ingaphakathi kungaba odongeni enjalo ukwahlukanisa okwesikhathi eshaweni. Isithombe sikhombisa ukuthi amashidi kungenziwa embozwe vinyl tape noma upende, kuncike izici design ingaphakathi. imiklamo polycarbonate ezisekelwe bayindlala ngenxa kulungiselelwa okusheshayo, ukucutshungulwa metal ukukhanya, okuhle ukukhanya transmittance, namandla high nomthelela nelangabi okusezingeni eliphezulu cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi izakhiwo.
Ngodonga eshaweni ungaba ukuphakama panel ezahlukene, ubude Umhlahlandlela, ngakho ubukhulu yalezi ezakhiwe zikhethwa izici ngamunye igumbi elithile. Indlela ukukhetha impahla, nje incike siyoba yini umklamo egumbini ngemva kokuphothula.